Lelee valvụ, nke a makwaara dị ka valvụ elele, valvụ na-agagharị agagharị, valvụ elele ma ọ bụ valvụ elele, ọrụ ya bụ iji hụ na onye na-ajụ ụzọ na pipeline na-agagharị na-enweghị nlọghachi. Mmeghe na mmechi nke valve elele dabere na ike nke usoro iji mepe ma mechie. Lelee valvụ bụ nke ...
Mkpụrụ vaịn zuru ụwa ọnụ mechiri emechi 1. Akụkụ zuru oke site na valvụ ụwa "Nke zuru oke" na valve zuru ụwa ọnụ bụ n'ihi na njikọ njikọ ya dị na axis, mana ọwa mmiri ya abụghị "kwụ ọtọ", kama ọ na-agwụ ike. Flow ga-agbanye 90 Celsius ka ọ gabiga ...
E nwere ọtụtụ ụdị valvụ ụwa. Olee otu esi ekewa ha
Dika akuku akàrà ahu, aga-ekewa valvụ ụwa ụzọ abụọ: valvụ akàrà ụwa dị nro na valvụ akàrà ike ụwa; Dika ihe atumatu nke diski a nwere ike kewaa uzo abuo: nkpuru uzo zuru oke nke uwa na uzo zuru oke nke uwa; Kwee ...
A na-enyocha ụkpụrụ ọrụ na usoro ọrụ nke valvụ ụwa
Na mmepụta na piping usoro nke coal chemical omumuihe, nkwụsị valvụ a na-ejikarị. Nke a bụ iji tụlee ụkpụrụ ọrụ ya na arụmọrụ ya. Taa, anyị ga-aghọta ya ọnụ. Valve ụwa, nke a makwaara dị ka valvụ a na-ebipụ, bụ otu n'ime valvụ ndị a na-ejikarị. Ọ bụ ihe a ma ama n'ihi na ...
Ọnụ ụzọ ámá valve bụ otu n'ime valvụ ndị a na-ejikarị. Kedu ihe e ji mara ya
Njirimara nke valvụ ọkọlọtọ mba 1, oghere na oge mmechi dị obere n'ihi na valvụ ọnụ ụzọ ámá mgbe ọ meghere ma mechie, nduzi ngagharị nke efere ọnụ ụzọ ámá dị n'akụkụ usoro ntụgharị nke ọkara. E jiri ya tụnyere valvụ ụwa, oghere na mmechi ...
Nkowa di nkpa nke uzo di iche iche
Dabere n'ụdị nke akàrà akàrà, a na-ekewapụta valvụ ụzọ dị iche iche n'ọtụtụ ụdị dị iche iche, dịka: valvụ ọnụ ụzọ ámá, valvụ ụzọ yiri ya, valvụ ụzọ abụọ yiri nke abụọ, ụzọ mbata ụzọ abụọ, na ụdị ndị ọzọ. myiri ọnụ ụzọ ámá valves. 1. Ọchịchịrị ọchịchịrị wed ...
Kedu ihe kpatara valvụ ọnụ ụzọ ámá Russia ji adabara maka ịhazi ma ọ bụ iji ntụgharị eme ihe
Oghere ọnụ ụzọ ụzọ ụgbọ mmiri Russia na-adịkarị mma maka ọnọdụ nke na-adịghị mkpa imeghe ma mechie ugboro ugboro, ma na-eme ka ọnụ ụzọ ámá ahụ meghee ma ọ bụ mechie kpamkpam. Ebughị n'obi iji ya mee ihe nchịkwa ma ọ bụ ntụgharị. Maka usoro mgbasa ozi dị elu, enwere ike ịkpata ọnụ ụzọ ámá mgbe ọnụ ụzọ ámá dị ...
Ntugharị valvụ nke ọkọlọtọ nke America na ọkọlọtọ valvụ nrụpụta mba wepụtara iwebata
Anyị na-ejikarị Pn, CLass, bụ ụzọ nrụgide, ihe dị iche bụ na ha na-anọchi anya nrụgide n'okpuru ọnọdụ nrụtụ aka kwekọrọ na ya dị iche, Pn European system na-ezo aka nrụgide kwekọrọ na 120 ℃, ebe ọkọlọtọ ndị America na-ezo aka na nrụgide kwekọrọ na 425 ....
Kedu ihe dị iche n'etiti ọkọlọtọ ọkọlọtọ America na ọkọlọtọ ọkọlọtọ German na ọkọlọtọ ọkọlọtọ mba?
(Ọkọlọtọ America, ọkọlọtọ German, ọkọlọtọ mba) ọdịiche dị n'etiti valves: Nke mbụ, site na koodu ọkọlọtọ nke mba ọ bụla nwere ike ịkọwapụta: GB bụ ọkọlọtọ mba, ọkọlọtọ America (ANSI), ọkọlọtọ German (DIN). Nke abuo, ị nwere ike iche na ihe nlere ahụ, mba ...
Emere valvụ ọkọlọtọ America, arụpụta ya, mepụta ya ma nwalee ya dabere na ụkpụrụ ndị America
Standardkpụrụ ọkọlọtọ ndị America bụkarị ụkpụrụ API na ASME, ASTM, ASTM bụ ụkpụrụ ihe eji arụ ọrụ; A na-akpọ Valves ndị e mere, arụpụtara, rụpụta ma nwalee dị ka ụkpụrụ ndị America si dị American ọkọlọtọ valvụ bụ ọmụmụ nnyefe usoro akara mmiri, na ...